Harry Kane Oo Sheegay Meesha Uu Doonayo Inuu Ku Biiro – Garsoore Sports
Harry Kane Oo Sheegay Meesha Uu Doonayo Inuu Ku Biiro
Weeraryahanka kooxda Tottenham Hotspur iyo xulka Ingiriiska ee Harry Kane ayaa diyaar u ah inuu u dhaqaaqo kooxaha dibedda safarkiisa xiga, iyadoo kooxda ka dhisan Ligue 1-ka Faransiiska ee Paris Saint-Germain ay ku dul meereeysaneyso saxiixiisa, sida laga soo xigtay 90min.
Warbaahinta ayaa sheeganeysa in Kane uusan la dhicin raadinta Tottenham ee tababaraha cusub ee beddeli doona Jose Mourinho iyadoo cayaaryahanka reer Ingiriis lala xiriirinayo kooxaha Manchester City, Chelsea iyo Manchester United.
PSG, oo suuqa ugu jirta weeraryahan ayaa lala xiriirinayay da’yarka aadka loo qiimeeyo ee kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland iyadoo shaki laga qabo mustaqbalka bartilmaameedka Real Madrid ee Kylian Mbappe.
Hayeeshee, Tababarihiisii hore ee kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa qeyb weyn ka qaadanaya inuu ka dhaadhiciyo xiddigan inuu usoo weecdo dhanka kooxdiisa PSG isagoo ilkalena ku fiirinaya Erling Halaand.
Harry Kane ayaa lagu soo waramayaa inuu ku wargaliyay Tottenham rabitaankiisa ah inuu ka tago kooxda todobaadkii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedkii Premier League-ga 2020-21.
Cayaaryahanka heerka caalami ee dalka Ingiriiska ayaa tan iyo markaas lala xiriirinayay kooxaha Manchester City, Chelsea iyo Manchester United.
Kooxda Tottenham ayaa si aad ah u doonaysa inay sii xejisato xiddigeeda, iskaba daa inay u ogolaato inuu ku biiro koox Ingiriis ah oo ay xifaaltamaan.
Guddoomiye Ku Xigeenka 1aad Ee Xiriirka K/cagta Soomaaliya Oo Ka Qeybgalay Doorashada Hoggaanka Xiriirka Kubbada-cagta Carabta